Meeraha Neptune. Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Saadaasha Shabakadda
Neptune waa meeraha ugu fog dhamaanteen Nidaamka qoraxda. Isaga gadaashiisa uun baa ah "Planet Pluto iyo Oort Cloud, taas oo calaamadeysa xadka Nidaamkeenna Qorraxda. Waa meeraha ugu fog dhammaan gaaska waaweyn (Jupiter, Saturn y Uranus). Thanks to horumarka sayniska iyo xisaabta waxaa laga helay saadaalinta xisaabta. Magaceedu wuxuu ka yimid ilaaha Roman-ka ee Neptune waxaana loogu magac daray midabkiisa buluuga ah maxaa yeelay Neptune waa sayidka biyaha oo dhan.
Maqaalkan waxaad ku baran doontaa dhammaan astaamaha meeraha Neptune iyo sidoo kale inaad ku ogaatid xoogaa xiiso gaar ah. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato meeraha ugu dambeeya ee Nidaamka Qoraxdu Midaysay? Haddii aad sii wadato akhriska wax walba waad baran kartaa.
1 Xog aasaasi ah
2 Meesha magnetka iyo siddooyinkeeda Neptune
3 Gaasaska iyo jawiga
3.1 Dhaqdhaqaaqa iyo isbeddelka jawiga
Neptune Waa meeraha ugu fog iyo kan afraad ee dabada ku haya kooxaha gaaska. Uranus iyo Neptune labadaba waxaa loo yaqaan kooxda barafka maxaa yeelay heerkulkoodu aad ayuu u hooseeyaa iyada oo ay ugu wacan tahay masaafada ay ka jiraan Qorraxda.Haddii aan isbarbardhigno meerayaasha intiisa kale, waa kan afraad ee ugu weyn iyo kan saddexaad ee tirada badan. Cufnaanta gaaskan waa 17 jeer tan meeraheenna.
Waxay leedahay gacan isle'eg oo ah 24.622 km waxayna ku taal masaafo dhan 4.498.252.900km qorraxda. Si ka duwan meeraheenna, oo iskeed isu rogto waxay ku qaadataa 24 saacadood. Dhaqdhaqaaqa wareega), Jalaatadaan weyn waxay qaadataa 16 saacadood oo keliya. Si kastaba ha noqotee, wareegga ku wareegsan Qorraxda ee qeexaya sanadaha dhammaanaya wuxuu noqdaa wax weligiis ah. Maxaa inoo ah sanad (oo ah intee in le'eg ayay qaadanaysaa in lagu wareego Qorraxda), meeraha Neptune waa 164,8 sano.
Waxaa loogu yeeraa Rafaa baraf ah maxaa yeelay celcelis ahaan heerkulka dusha sare waa -220 digrii marka la barbardhigo 15 digrii dhulkeenna. Inay tahay meeraad ka weyn dhulka, culeyska dusha sare ee dhulbaraha waa 11 m / s2.
Marka meerayaashaas loogu yeero gaam waaweyn, macnaheedu maahan inay ka kooban yihiin gebi ahaanba gaasas. Xudunta Neptune waxay ka samaysan tahay dhagax la shubay oo isku jira biyo, ammonia dareere ah, iyo gaaska methane. Midabka buluuga ah ee lagu garto sabab uma aha joogitaanka biyaha dusha sare, laakiin gaaska ugu weyn ee hawo-mareenka ah waa methane.
Meesha magnetka iyo siddooyinkeeda Neptune
Haddii aan falanqeyno aagga magnetic ee Rafaaankan barafoobay, waan fiirsaneynaa taas waxay u janjeedhaa ilaa 47 digrii marka loo eego dhidibka wareegga waxayna ka barakicisay bartamaheeda 13.500 km. Xaaladdan oo kale, maahan jaaniska meeraha oo keenaya weecashadaan inay dhacdo, laakiin taa beddelkeeda qulqulka ka jira gudaha maadadda iyo gaasasku waxay keenaan in aaladda elektromagnetic-ka ay leexato.
Ka soo horjeedka waxa la ogaan karo, Neptune, sida Saturn, wuxuu leeyahay siddooyin. Caddaynta tan waxaa helay dayax gacmeedka Voyager II markii, 1989, ay ku guuleysatay inay sawir ka qaaddo meeraha oo ay u dhowaato wareegeeda. Intaa waxaa dheer, ma aha oo kaliya inay leedahay siddooyin sifo leh, halkii ay leedahay 8 dayax. Tani waa wax jabiya qorshayaasha, illaa iyo inta aan u tixgelinno astaamaha Dunida sida caadiga ah. In kasta oo dhamaadka maalinta, ma jiraan wax caadi ah oo horay loo sii aasaasay, maadaama aan nahay bini-aadamkii dhigay qaybaha.
In kastoo ay umuuqato wax la alifay, Neptune waxay leedahay nidaam ka kooban 4 siddo oo cidhiidhi ah oo dhuuban oo midab hoosaysa leh. Tani waa waxa iyaga ka dhigaya kuwo aan la aqoonsan karin oo leh baaxadda dhibcaha. Wareegyadu waxay ka kooban yihiin qaybo boodh ah oo sannado badan ka go'ay bilaha gudahooda. Jajabyadaas waxaa isugu soo ururay saamaynta cuf isjiidadka waxayna ka go'een dayaxyadooda saamaynta meteorites-ka yar.
Gaasaska iyo jawiga
Sida la arki karo, ahaanshaha gaas weyn, jawigiisu waa arrin muhiim ah oo lagu xisaabtamo. Waa la arki karaa haddii dusha sare ee meeraha lagu falanqeeyo isha qaawan inay leedahay dhibco la mid ah duufaannada Jupiter ka jira. Si kastaba ha noqotee, baroodyadu ma xasilloon yihiin sida meeraha kale, laakiin way samaysmaan oo ay baaba'aan markii waqtigu dhammaado. Tani waxay naga caawinaysaa inaan kala soo baxno joogitaanka duufaanno xoog leh laakiin aan dheereyn.
Wuxuu lahaa waxa loogu yeero Barta weyn ee Madoow oo leh cabbir la mid ah kan meeraheenna, laakiin la waayey 1994. Mar dambe ayaa mid kale la sameeyay. Tani waxay ina siineysaa inaan fahano iskuxirka suuban ee duufaanada ka dhaca jawiga. Sidoo kale waa in la sheegaa in dabaylaha ku dhaca Neptune loo tixgeliyey kuwa ugu xoog badan dhammaan meerayaasha ka kooban Nidaamka Qorraxda. Qaar badan oo ka mid ah dabaylahaasi waxay u duulaan jihada ka soo horjeedda xaggeeda wareegga.
Xaqiiq cajiib ah, meelaha ku dhow Barta Weyn ee Weyn dabeylo gaaraya ilaa 2.000 km / saacaddii ayaa la duubi karaa. Malaha, qof bini-aadam ah oo loo sakhiray dabeylahaas, wuxuu u dhiman doonaa jiidis iyo garaacis cadaadiska hawada.
Dhaqdhaqaaqa iyo isbeddelka jawiga
Sawirada meerahan ee buugaagta iyo dukumiintiyada ayaa isbadalaya sanadihii lasoo dhaafay, maadaama aan si isku mid ah loo ilaalin. Dhibcaha la sameeyay oo la burburiyey ayaa beddelaya qaab-dhismeedka aan ku aragno meeraha. Ku saabsan heerkulka, heerkulka aadka u hooseeya ayaa la diiwaan geliyey inuu ahaa illaa -260 digrii, intaad Dhulka joogtid, tan ugu yar ee la diiwaan geliyey waa -90 digrii.
Halabuurka jawigu wuxuu ka kooban yahay haydarojiin iyo helium si aad u tiro badan iyo gebi ahaanba nitrogen. Dhamaan dusha sare waxaan ka heli karnaa meelaha leh barafka biyaha, methane iyo ammonia ice (Heerkulkan hoose gaasasku way barafoobaan). Daruuraha ma aha uumiga biyaha, maadaama aysan uumi jirin heerkulkaas. Waxay ka samaysan yihiin methane barafaysan oo si dhakhso leh ayey isu beddelaan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto Neptune iyo astaamaheeda gaarka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Meeraha Neptune
Taariikh nololeedka Max Planck